Shaqaalaha Falastiin oo Israel si kumeel gaar ah ugu ogolaatay in ay ka shaqaystaan dhulka ay Maamusho. - Awdinle Online
Shaqaalaha Falastiin oo Israel si kumeel gaar ah ugu ogolaatay in ay ka shaqaystaan dhulka ay Maamusho.
May 3, 2020 (Awdinle Online) –Israel ayaa dib u furtay dhowr isgoys ka dib heshiis ay la gashay Maamulka Falastiin, waxaana tallaabadaani u oggolaaneysa kumanaan reer Falastiin ah oo ku sugan Daanta Galbeed in ay helaan fursado shaqo oo ay ku tagaan ugana soo laabtaan dhulka Yuhuudo maamusho.
Furitaanka oo ah labo maalmood, ayaa la rajaynayaa in uu socon doono illaa Isniinta, waxaana arki doonaa ilaa 40,000 oo Falastiiniyiin ah ku waas oo u badan kuwa ka shaqaysta dhismaha iyo beeraha.
Tallaabadan ayaa timid iyada oo la fududeynayo xannibaadaha lagu xakameeyo faafidda coronavirus ee Israel, oo illaa iyo hadda la diiwaangeliyay 16,185 kiis iyo 229 dhimasho ah.
Dhanka kale, Maamulka uu madax ka yahay Maxamuud Cabaas ayaa diiwaangeliyay 353 oo kiis, kuwaas oo inbadan oo la rumeysan yahay in ay u shaqa tageen gudaha Israel.
Sida ku xusan heshiiska, shaqaalaha ayaa sii joogi doona gudaha Israel “ugu yaraan saddex toddobaad”, ayay tiri Nida Ibrahim oo ka tirsan Al Jazeera oo ka howl gasha, Beytlaxam.
“Caadi ahaan, shaqaaluhu waxa ay si maalinle ah u aadi jireen uga soo laaba jireen dhulka ay Israel maamusho, hayeeshee hada xaalladu intaasi waxaa iska badalay in ay gudaha Israel sii joogidoonaan muda asbuucyo ah” ayuu raaciyay Ibraahim hadalkeeda.
Bishii la soo dhaafay, shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Israel ayaa lagu eedeeyay in ay joojinayaan shaqaalaha reer Falastiin sababo la xariira xanuunka COVID-19.
Previous articleBeeraha lagu xanaaneeyo Xayawaanada oo laga dareemay cidlada dadka ku xanniban Guryahooda.
Next articleDuleedka Gaalkacyo oo dagaal ku dhexmaray Ciidamo ka kala soo jeeda Puntland iyo Galmudug